Ukubhala iBhlog elungileyo
Iibhloko , okanye iiLogs zeWebhu, ziijenali ze-Intanethi ezihlaziywa rhoqo, ngamanye amaxesha mihla le. Uhlaziyo, (ekwabizwa ngokuba yi ukungena okanye a iposti ) ihlala imfutshane, mhlawumbi izivakalisi ezimbalwa, kwaye abafundi banokuphendula ngokungena kwi-Intanethi. Abantu ababhala iiblogs babizwa njalo iibhlog . Iibhlog, ulwimi esidleleni, bazibiza kunye neebhloko zabo blog blog .
Ipilisi eblue 44 367
Ityala: © iStockphoto.com / mattjeacock
Iibhloko ziyindlela elungileyo yokugcina wonke umntu kusapho esazi ngeendaba zosapho zamva nje ngaphandle kokwenza umrhumo wefowuni- unokufunda umva nje uhlaziyo olubalulekileyo lokufumana iindaba zamva nje. Ukongeza, iibhloko ezininzi zisetyenziselwa ukusingatha iifoto, kwaye ukwakheka kwazo kunokuba yindlela elungileyo yokugcina umkhondo wokukhula kosana, uhambo, okanye inkqubo yokucwangcisa umtshato.
Ababhali abaziingcali bahlala bejongela phantsi iibhlog, kuba ukubhala kwabo ngokungekho sesikweni kwi-Intanethi kunqabile ukuba bafumane isibonelelo kumhleli olungileyo. Iiblogi zaziwa ngokubhala nje okuqhelekileyo kunye nezinto ezingalindelekanga kwezihloko, kodwa ezona bhlog zibalaseleyo zingqinile ukuba -kungakhathalelwanga iziphumlisi kunye nopelo-nababhali be-novice banokonwaba ngokwaneleyo ukuze batsale ababukeli.
Iibhlog ezinomxholo obandakanyekayo ngokukodwa, njengokuchaza uhambo oluya kwihlabathi liphela, banethuba lezinto ezinomdla, kodwa nezinto ezinomtsalane zinokutsala abaphulaphuli ukuba unesimbo sokubamba nelizwi.
Nantsi imigaqo emithathu ekhokelela ekubhaleni ibhlog ephumeleleyo:
Phuhlisa isimbo sokubhala kunye neethoni efanelekileyo kwimathiriyeli yakho yesifundo.
Thumela rhoqo, nokuba iiposti zakho zimfutshane.
Vumela abafundi bakho ukuba banike izimvo kwizithuba zakho.
Phuhlisa isimbo sokubhala nelizwi
Uyilo olukhulu lwendawo kunye neendlela zobuchwephesha ezingatshintshiyo ekuphuhliseni indlela yokubhala enomdla, efundekayo. Uninzi lwethu alwenzi ukubhala okubhaliweyo kubomi bethu bemihla ngemihla okanye sigcine idayari. Ukubhala ngawe akunakuze kube lula, kwaye unokuzifumana ubanda phambi kwescreen sekhompyuter okanye ukothuka kwaye wenze isenzi ngokungeyomfuneko.
Nazi iingcebiso ezimbalwa onokuzisebenzisa ukuphucula elakho ilizwi kunye nesitayile sebhlog yakho. Okokuqala, khumbula ukuba ibhlog yincoko. Zama ukubhala ngendlela othetha ngayo. Gwema i-jargon kunye ne-clichés kwaye ungasebenzisi kakhulu i-thesaurus. Kunokuba luncedo ukuthetha ungeniso lwakho ngokuvakalayo ngaphambi kokuzama ukuluchwetheza okanye ulifunde ngokuvakalayo emva kokuba ulibhalile. Ukuba ufumanisa ukuba uyasokola njengoko ufunda ngokuvakalayo okanye uthetha ngokungaqhelekanga, cinga ngento onokuthi ukuba ubuthetha nomhlobo kunokuba ubhale.
Okwesibini, bhala ibhlog yakho kunye nomhlobo othile okanye ilungu losapho engqondweni. Ukucinga ngomntu omazi kakuhle kwaye ngubani onokufuna ukufunda ibhlog yakho kuya kukunceda uphumle kwisitayile sakho sokubhala. Kungenxa yoko le nto iye yathandwa ngabantu abaninzi ukuba baqalise ukungena kwiijenali zabo Molo Dayari . Injongo kukwenza ukuba ukubhala kwakho kuvakale ngakumbi njengawe kwaye kungafani nesincoko esiphakamileyo.
Soloko ujonga abaphulaphuli bakho. Ukuba ubhalela kuphela abahlobo abasenyongweni kunye nosapho, awudingi kuchaza ukuba uSara uyintombi yakho eneminyaka eyi-8 ngalo lonke ixesha umchaza. Kodwa ukuba ibhlog yakho itsala abantu ababanzi, unokufuna ukwenza izingqinisiso okanye uluhlu lwamagama ukunceda abafundi abatsha ukuba balandele.
Okokugqibela, ngaphambi kokuba uqale ukubhloga, chitha ixesha lokundwendwela ezinye iibhlog ezinje ngale ucinga ukuyenza. Funda enye okanye ezimbini kwiiveki ezimbalwa kwaye ujonge izinto ezinje ngobude bezithuba, ubukhulu, isimbo sokubhala, kunye nezinto zentloko. Unokufumana iingcamango ezintle kwiblogi yakho ngokuqaphela into oyifumanayo inomdla kwaye iyanyanzelisa kwiiblogi zabanye abantu.
Hlaziya, hlaziya, hlaziya
Iiblogi ezitsala uninzi lwabafundi zezi zihlaziywa rhoqo. Ukuba uqala ibhlog, zilungiselele ukuchitha ixesha elithile usebenza kuyo yonke imihla okanye ezimbini. Ukuba uza kuba yiblogger, kuya kufuneka ubhlog! Kuthatha uqeqesho uninzi lwethu ukubhala, nokuba kuncokolwa, yonke imihla. Ukuba ufumanisa ukuba uyoyika ukuthumela kwibhlog yakho, mhlawumbi ibhlog yakho ayiyiyo.
Njengoko uhamba malunga nosuku lwakho, gcina ibhlog yakho ngasemva kwengqondo yakho. Unokufuna ukuphatha incwadana apho unokuzibhala khona izikhumbuzo zezihloko ofuna ukubhloga ngazo kamva. Qala ukuthathela ingqalelo iinxalenye zobomi bakho ezinomdla kakhulu kuwe; ezo ziya kuba ziindawo apho abahlobo bakho kunye nosapho banomdla kuzo. Musa ukoyika ukubhala malunga nemisebenzi yemihla ngemihla - amatikiti okupaka kunye nokulungiswa kwemoto - kodwa ungakutyesheli ukuthetha malunga nokucinga nokuziva kwakho. Zonke ezi ndawo ziya kwenza kube lula ukuba uhlaziye rhoqo.
Ukuba ne-co-blogger kunokuthatha uxinzelelo, ngakumbi ukuba bonke ababhali banegalelo rhoqo. Ukuba uza kusebenza nabantu abaliqela kwibhlog enye, thetha malunga nokuba ulindele ukuba omnye athumele kangaphi ukuze ugcine kugxilwe kunye nokudibana kwibhlog yakho.
Ukuba uza kuhlaziya ibhlog yakho ngeveki, ngeveki, okanye ngenyanga, zama ukungaguquguquki malunga nokongeza iiposti ezintsha ukuze abafundi bakho bazi ixesha lokufumana. Umzekelo, unokukhetha ukuhlaziya indawo yakho rhoqo ngeCawa ngokuhlwa.
Inkalo ebalulekileyo yeeblogi kukuba zibonisa ukubhalwa kweblogger kunye nezimvo zabafundi. Xa undwendwela ibhlog, uhlala ufumana ikhonkco lezimvo phantsi kokubhaliweyo kwebhlog nganye. Ukucofa eli khonkco kunceda ukuba ufunde izimvo ezivela kwabanye abantu kwaye ungenise eyakho. Ngokwesiqhelo iiblogger zenza ezazo izimvo kwizithuba ezikwindawo yazo, kodwa ngamanye amaxesha ibhlogger yongeza impendulo kwicandelo lezimvo kuba yeyona ndlela ithe ngqo yokujongana nezimvo zomnye umntu.
iblisters kulwimi olusabhadazayo
Ayizizo zonke iibhlog ezikhetha ukumilisela inqaku lamagqabantshintshi, kodwa ukuba ufuna ukuphucula incoko nabaphulaphuli bakho, amagqabantshintshi yeyona ndlela yokwenza oko. Inqaku lamagqabantshintshi yindlela elula yokubandakanya abaphulaphuli bakho kunye nokufumana ingxelo ebalulekileyo malunga nento oyenzayo nebhlog yakho.
Ukuba uthatha isigqibo sokuvumela izimvo kwibhlog yakho, qiniseka ukuba uzijongile. Inqaku lamagqabantshintshi lenza ukuba kube nokwenzeka ukuba nabani na ongeze izimvo kwibhlog yakho kwaye awusoloko uyayithanda into abayithethayo. Umzekelo, abagaxekile ngamanye amaxesha basebenzisa ithuba lokungakhathaleli iibhlog zokwenza intengiso ongayifuniyo kwibhlog yakho. Zonke iisoftware ezifanelekileyo zeblogi zenza ukuba kube lula ukuba umbhali asuse izimvo.
Ngaba isiraphu ye-dm ene-bromfed ine-codeine
ungathatha i-advil kunye ne-nyquil kunye
I-pepto bismol idosi yeminyaka emi-2 ubudala
iipilisi rp 10 325
indlela yokuthatha imilinganiselo yomzimba yowasetyhini